बुटवलका सडकमा टिप्परको दादागिरी कहिलेसम्म ? - Butwal Online
बुटवलका सडकमा टिप्परको दादागिरी कहिलेसम्म ?
बुटवल, चैत्र १९ । बुटवलका सडकमा टिप्परको दादागिरी कुनै नौलो कुरा होइन नत तिनका ड्राइभरले सडकमा गुडेका अरू सबारीसाधन देख्छन् नत जेब्रा क्रस, सडकमा हिड्ने मान्छे देख्ने त कुरै भएन । व्यवसायी ज्यु हरू सुन्दा तपाईंहरूको चित्त दुखेको हो भने त्यस्तो सानो चित्तलाई फराकिलो बनाउनुहोस र सोच्नुहोस भोलीका दिनमा तपाईं र तपाईंका आफन्तहरू पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छन् ।
यो सत्य हो कि तिव्र गतीमा अरू सबारीसाधनलाई पेलेर गाडी चलाउनु, जेब्रा क्रस र बाटो काट्ने मान्छेको ख्याल नगर्दानै दुर्घटना बढ्ने गरेका छन् । सर्वसाधारण मानिसहरूले बाटो काट्ने ठाउँमा पनि गाडीको गति कम भएको पाईदैन । ट्राफिक प्रहरीले समय समयमा चालक तथा सहचालकहरूलाई दुर्घटना कम गर्न भन्दै अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, गति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै जानकारी तथा प्रशिक्षण दिइरहेको हुन्छ तरपनी यस्ता कार्यक्रमहरूले खासै प्रभाव पार्दैनन् अझ भनौ लाएको बानी कतै नजानी भनेजस्तै हुन्छ ।
आफुले आफ्नो सवारीसाधनको गति नियन्त्रण गर्दागर्दै भनौ वा अनुशासन पालना गर्दागर्दै पनि धेरैको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । जेब्राक्रसबाट बाटो काट्दा पनि सुरक्षीत हुन सकिदैन यो सहरमा । बुटवलकै सडकमा हिजो साँझ फेरी यस्तै दु:खद घटना घटेको छ । टिप्परको ठक्करबाट बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० रामनगर स्थित धागो कारखाना नजिकै भएको दुर्घटनामा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक देवदह ४ निवासी डोलराज अर्यालको मृत्यु भएको हो ।
देवदह नगरपालिका खैरेनिबाट बुटवलतर्फ आउदै गरेको लु २ ख २२३२ नम्बरको टिप्परले बुटवलबाट देवदह तर्फ जाँदै गरेको लु २२ प ४९७९ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिदा मोटरसाइकलमा सवार अर्यालको मृत्यु भएको हो । प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार टिप्परको ठक्करबाट टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका अर्यालको उपचारको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा लैजादै गर्दा मृत्यु भएको हो । हिजो साँझ सवा सात बजे भएको उक्त दुर्घटनामा सम्लग्न टिप्पर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । ५० बर्षिय अर्यालले बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बिषय अध्यापन गराउदै आएका थिए ।
गत वर्ष तिलोत्तमा–२ कि ८९ बर्षिय बिष्णु कुमारी भट्टराई आफ्नै सुरमा जेब्राक्रसिङ बाट बाटो काट्दै थिईन् सडकमा रप्तारमा आएको लु १ ख ९८३८ नम्बरको ट्रिपरले उनलाई ठक्कर दियो केहि बोल्न नपाउँदै अन्त्य भयो भट्टराईको जीवन । गत वर्षकै पुस २ गते बुटवलको हस्पिटल लाइनमा सञ्चारकर्मी दल बहादुर भण्डारीले टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
यी त केबल प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् दुर्घटना न्युनिकरण गर्नेतर्फ लाग्ने कि सधैंभरी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका मानीसहरूको लास गनेर बसिरहने ? भोलीका दिनमा यस्तै दुर्घटनामा परी कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् दुर्घटना न्युनिकरण गर्न व्यबसायी, ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित पक्ष सबैको समयमै ध्यान पुगोस् ।
टिप्पर चालकले गति नियन्त्रण नगर्दा बारम्बार यस्ता समस्या दोहोरिदै आएका छन् । संविधानमा टिप्पर चालकलाई दिईने सजायमा छुट भएका कारण समेत यी घटनाले प्रसय पाएका छन् । पछिल्लो समय व्यवस्था गरिएको कानुनले पूर्णता पाएको छैन् । सवारीचालकको ससाना लापरवाहीका कारण सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । सरकारले यसप्रति गम्भिर बन्न जरुरी छ ।[email protected]